Muxuu Waare kaga duwanaaday Madaxda maamul goboleedyada Kadib kulamadii Garowe? – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 31st January 2019 093
Kulankii ka dhacay magaalada Garowe kadib madaxda maamul goboleedyada ayaa dib ugu laabtay deegaanada caasimadda u ah si waxyaabaha looga hadlay shirkii ka dhacay magaalada Garowe ay ula wadaagaan xubnaha ay isla shaqeeyaan.
Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaanan ku hakan magaalada Jowhar oo caasimad u ah maamulka Hirshabeelle, waxaana diyaaradii uu la socday ka haray guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaano la socday, iyadoo isla diyaaradda ay Waare usoo gudbisay magaalada Muqdisho.
Wararka aan heleyno ayaa sheegaya in madaxweyne Waare uu usoo gudbay magaalada Muqdisho sabab la xiriirta kulamo kale gaar ah oo uu doonayo inuu la yeesho madaxda dowladda Soomaaliya.
Sidoo kale xogaha aan heleyno ayaa sheegaya in madaxweyne Waare uu doonayo in madaxda dowladda Soomaaliya uu kala hadlo kadib heshiiskii ay la galeen dowladda Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle, inaysan helin dhaqaalo badan oo loo balan qaaday.
Waare ayaa ka duwanaaday madaxdii maamul goboleedyada ee ka qeyb galay munaasabadii ka dhacday magaalada Garowe, sababtoo ah madaxda maamul goboleedyada ayaa dhamaan dib ugu laabtay caasimadaha maamul goboleedyada, laakiin Waare ayaa usoo gudbay magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Waare ayaa la sheegay in hadda uu ka dagay culeesaadkii baarlamaanka, balse waxaa jiro culees siyaasadeed u dhaxeeyay isaga iyo madaxda maamulka Hirshabeelle.
XOG: Corneyl Cabaas Gurey oo ay haysato laba daran Mid dooro, xilli maalmihii la soo dhaafay uu qas Iyo Fowdo ka waday Degmada Baardheere.
admin 12th January 2016 12th January 2016
DEG DEG: Dowlada Soomaliya iyo Ciidamadeeda oo Markii ugu Horeysay ku dhaqaaqay Fal Geesinimo ah ka dib Markii ay Xabsiga dhigeen Ciidamo ka tirsan Amisom Maxay tahay Sababta loo Xiray Ciidamada Amisom?
Garowe oo Kasocdo Shirkii Higsiga Sanadka 2016 iyo Khudbada Socda+ Xaasan sheekh oo Khudbad Xasaasi ah Jeediyeey